Uqalise i-Bentley Descartes entsha v8i - Geofumadas
Epreli, 2012 ezintsha, Microstation-Bentley, Topography
I-SELECTseries ye-3 version ye-Bentley Descartes iye yaziswa. sasilindele iintsuku ezimbalwa ezedlulileyo. Ngoko sisasaza ukukhululwa komsebenzi we-Bentley Systems.
I-HOUSTON-SPAR International - Aprili 16, I-2012 - iBentley Systems, Incorporated, inkampani ehamba phambili ezinikezele ukubonelela izixazululo zeekhompyutha ukuxhasa iziseko, namhlanje ushicilele imboni yokuqala ngokukhutshwa kweBentley Descartes V8i (I-ELELECTSeries 3) - Uhlobo lwe-3D oludibanisa amafu, umfanekiso we-raster kunye nejometri. Imifuziselo NGENXA ukwandisa eluncedo amafu indawo ngokuxhasa de ugqitywe uyilo hybrid ukuba Ndihlangule "njenge-esebenza" 3D imifuziselo ukuze akhonze imisebenzi kunye neemfuno nokugcinwa yomnini-mashishini. Ngu kuphela evumayo hypermodeling - ukuqhutywa enobuchule of imihlobo-idala 3D Loo umxholo luquka ulwazi naluphi na uhlobo zobunjineli - Bentley izimisele Ukuphucula ukhuseleko iziseko kunye nokomelela ngexesha Ukwanda imbuyekezo umnini-nabasebenzisi 'mali zabo zobunjineli.
I-Bentley isetyenzisile isigaba salo mbono ngokubandakanya imodeli yeendawo ezinokutsha (ii-STMs) kwaye, kungekudala emva koko, ukubeka amafu njengezinto eziphambili zeenkcukacha kuzo zonke iinkcukacha zeenkcukacha zeenkcukacha kunye nolwazi lwezobunjineli. Kuqala Kwaqaliswa amafu ingongoma ibe kwipotifoliyo ITS yi iyalungisa eliphezulu-komsebenzi omtsha injini ukuya MicroStation, kwaye kutsha nje ezifunyenwe Pointools Ltd, umboneleli-software ngongoma-ilifu ephambili iintsimbi-cala.
Ngokukhutshwa kweBentley Descartes V8i (SELECTseries 3), Bentley uqalisa ingcaciso ebonisa ngemveliso eziphambili processing indawo-yelifu - manipulation STMs - Oko esilungisa phantse zonke iimfuno 3D umfanekiso processing yeengcali lwezibonelelo. Ngalo mveliso, amaqela eprojekthi angasebenzisa amafu eenjini zobunjineli kuzo zonke iindidi zezibonelelo. Ngaphezu koko, baya kukwazi ukusebenza kunye naluphi na uhlobo lweedatha-efayili yedatha, kuquka i-LiDAR yangaphandle kunye nomhlaba kunye ne-radar engena emhlabathini.
Ukubuya kungekudala lidini entsha esuka Bentley ngokukodwa uleyisayo amalahle Ukuba isikali amafu ngongoma sele kudala kuphela Loo yokusebenza yabo ingcaciso ebonisa komsebenzi de ugqitywe. Ebizwa ProjectWise Point-ilifu Services, esta ezintsha nemiqukuqela yamanzi phezu imfuno kwizicelo Bentley kuphela isabelo lelifu ngongoma zingajongwa okanye kufakelwe, Ukuququzelela zokwabelana nomsebenzi wobambiswano uvula ixabiso terabytes ze data ngongoma-efini.
Iindibaniso ukubukela ngongoma-efini apho, inkqubo, kunye nolawulo kuzo iimveliso Bentley - Ukubandakanya MicroStation, Bentley Descartes, Bentley Pointools, kunye ProjectWise - ulihlangula Owona, ezibanzi, kunye nemveliso software lobunjineli iimarike yokusetyenziswa data ngongoma-ilifu Kuyo yonke le iiprojekycle I-Bentley Pointools yee-workflows ezimeleyo kunye nama-Bentley Pointools, i-Bentley Pointools View kunye ne-Bentley Pointools PODcreator.
URichard Zambuni, umlawuli wentengiso we-Bentley, uthe,
"Kwiminyaka eyadlulayo, imveliso yethu Bentley Descartes kwenza idabi for modeling 2D Ukuba abasebenzisi bethu amandla ukudibanisa imifanekiso Nge geometry lula kwaye ngexesha real Kubanjwe kwezobuchwepheshe warping ezintsha Bentley kaThixo. Namhlanje, i Bentley Descartes omtsha liluphumeza idabi ngokwendawo 3D ulwazi umzekelo, ekuxhobiseni abasebenzisi bethu ukulawula Ngokukhawuleza STM kunye nemvakalo ngayo orthoimagery Yokufumana Ekubeni mphandle echanileyo kakhulu ngengingqi. Bangakwazi ukwenza okufanayo kunye nomzekelo we3D weedolophu, ukudibanisa imifanekiso kunye neejometri ukufumana ukuchaneka ngobunjineli kunye nokulungelelanisa ukuba abaqeqeshi bezakhiwo bazifuna. "
Waqhubeka wathi, "Ngoku ngoku ngamafu, i-new version yeBentley Descartes idibanisa ngokukhethekileyo olu luhlobo lwedatha oluphambili kunye neefayili ze-raster kunye nejometri kwiimpawu ze-3D zolwazi ngokusetyenziswa kwamandla afana nokuhlelwa kwe-cloud-classification editing; ukukhwa kunye nokuqhafaza kwezinto ze-vector ukuya kwifu; uphawu olutsha "lwe-flashlight" oluvumela abasebenzisi ukuba bajonge ngokubonakalayo kwiindawo ezikhoyo kwifu elibonisa ukuhamba ngokulula nokuqonda; isilumkiso se-smart snap esenza umsebenzi ogqithiseleyo wokufumana ixesha eliphezulu, eliphantsi okanye eliphakathi kwindlela echazwe ngumsebenzisi; kunye nokukwazi ukuthekelisa kwiifom zefayile ze-LAS kunye ne-POD zokuphinda zisetyenziswe kwezinye izicelo. Zonke ezo zithuthukisi zenza ukusetyenziswa kwamafostile kuninzi enembile kwaye inemveliso, ixhobisa abaqeqeshi be-GIS kunye neCAD, abaphandi, abacwangcisi basezidolophini, kunye neenjiniya ukuba basebenzise imodeli engaxubekiyo ekudalweni okungcono, izakhiwo ezihlakaniphile. "
Ukuphawula ngokutsha kokuphuma kwe-Bentley Descartes V8iMatthew McCarter, CAD Technician, Capital Iinkqubo Directorate, London Ngokufihlakeleyo, Wathi, "Njengokuba umsebenzisi lwe data ngongoma-efini iiphakheji ezahlukeneyo CAD ngaphezu kweminyaka 12, mna ndachukumiseka kakhulu izixhobo processing ngongoma-efini Bentley Descartes. Ndikhangele phambili ngokusebenzisa i sectioning emnqamlezweni, 'isibane,' nezinye usebenziso ukuba utsala geometry ukuphucula ngakumbi ukwandisa ukwanela of Land Team Survey London Ngokufihlakeleyo kaThixo. "
UStephane Poitras, umlawuli wezoLwazi, uMasipala waseSaguenay, eQuebec, eCanada, wathi,
ISixeko saseSaguenay siquka malunga neekhilomitha ezili-1 ze-1136, kwaye siye sahlala sinemiba ezama ukudala imimiselo yendawo ehamba kuyo yonke indawo. Ngolwazi olutsha olusasazekayo lwethempathikhi yokuthumela i-Bentley Descartes V8i(I-SELECTseries 3), le ngxaki ixazululwa. Siye sakha i-STM, sidwelwe ngaphezu kwe-1.5 gigabytes yomfanekiso we-raster ngaphezulu kwendawo, kwaye sibone ukusebenza okumangalisayo. "
U-Morten M. Sørensen, inkokheli yeprojekthi, uNIRAS BlomInfo, wathi,
"Ngokukhutshwa kweBentley Descartes V8i(I-SELECTseries 3) ukuphuculwa okunamandla ekubonweni kwedatha yethu yophando kuyakwenzeka, kuba kule nguqulo entsha sinokuyisebenzisa imizekelo emikhulu yomhlaba kwaye senze i-orthophotos ephezulu. Le mi sebenzi emitsha iye yahlengahlengisa i-workflows yethu kwaye iphucula iziphumo, ngoko ngoku siyakwazi ukuthetha iziphumo zethu kubaxhasi bethu ngokukhawuleza, bhetele, nangendlela ekholisayo. "
Bentley Descartes V8i (I-ELELECTSeries 3) isebenza kwi-MicroStation V8i (I-ELELECTSeries 3) inkqubela yeenkcukacha zokuhamba phambili, ngokukodwa kwiimpahla zeziseko kunye nezixeko ze-3D, ngoku:
ukuqhutyelwa kwefayili ephakamileyo
ubuchule bokusingatha imodeli yehlabathi ephezulu kakhulu
I-3D yokubhala imiyalezo yesimo
Ngolwazi olongezelelweyo malunga neBentley Descartes V8i (I-SELECTseries 3), tyelela www.bentley.com/descartesAIM.
Mayelana neBentley Systems, Incorporated
I-Bentley yinkokheli yehlabathi ezinikezele ukubonelela izakhiwo, oonjiniyela, abaqeqeshi bee-geospatial, abakhi, kunye nabanini-mhlaba abanezixhobo zesisombululo esibanzi zokugcina izibonelelo. Injongo kaBentley kukuxhobisa abasebenzisi bayo ukuba baphumelele lwazi ngokusebenzisa iiprojekthi ezidibeneyo ekusebenzeni ngokuphezulu izixhobo ezinengqiqo. izisombululo zayo kuquka iqonga MicroStation for kuyilo lwezibonelelo kunye ngumzekelo, iqonga ProjectWise ekunokusetyenziswana iqela ngeprojekthi ekhoyo kunye nokwabelana emsebenzini, kwaye iqonga AssetWise imisebenzi asethi yeziseko - zonke ezixhasa ipotifoliyo ebanzi izicelo interoperable kwaye zincediswe ngeenkonzo zobungcali ehlabathini lonke. Eyasungulwa kwi-1984, i-Bentley iye yanda kubaxhamli be-3,000 kumazwe angama-45 kunye ne-$ 500 yezigidi kwiimali zonyaka. Ukususela kwi-2003, inkampani inotyale imali engaphezulu kwe-$ 1 yezigidigidi kuphando, uphuhliso, kunye nokufumana.
Ulwazi olongezelelweyo malunga neBentley lufumaneka www.bentley.com nangaphakathi Ingxelo yonyaka yonyaka kaBentley. Ngeendaba zeBentley njengoko kwenzeka, bhalisela feed RSS Iimpapasho zee-Bentley kunye neentetho zeendaba. Ukujonga iqoqo lokukhangela iiprojekti zengqalasizinda ezintsha ezenziwa ngonyaka Iibhaso eziphefumlelweyo, ukufikelela kwiBentley Unyaka kwiZisekompapasho Ukufikelela kwisayithi yokunxibelelanisa i-intanethi eyenza amalungu eendawo zoluntu zixhumane, athethe, kwaye afunde kwabanye, tyelela Yibutho.
Ukukhuphela I-Bentley Infrastructure 500 Abanikazi abaphezulu baphakamisa, ukuhlanganiswa okuyingqungquthela yehlabathi jikelele kunye nabanini-bucala bezakhiwo zeziseko ezisekelwe kwixabiso lezakhono zabo zokutsalwa kweziseko, batyelelewww.bentley.com/500.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ikhosi Uhlelo lwesibini GIS kunye geodatabases
Post Next Guqulela zika ethile ngeshumi, UTM nokuzoba in AutoCADOkulandelayo "
Omnye Uphendule "Ukhululwe i-Bentley Descartes entsha v8i"
Inomdla kule sixhobo